रामकुमारी झाँक्रीलाई राष्ट्रपतिकी छोरीको प्रश्नः मेरी आमाको सारीमा प्रश्न उठाउने तपाईं को हो ? - Sutra News
राष्ट्रपतिको चरित्र हत्या गरेको भन्दै झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न माग
कागजी बादशाह खड्गप्रसाद ओली ढलिसकेः रामकुमारी झाँक्री
राष्ट्रपतिविरुद्ध आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेकी झाँक्रीलाई प्रहरीले बोलायो अपराध महाखाशा
गोरखा पुगेर झाँक्रीले राष्ट्रपतिलाई के भनेकी थिइन् ?
काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी छोरी उषाकिरण भण्डारीले नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर दुःख व्यक्त गरेकी छन् । सोमबार फेसबुकमा आफ्नो भनाइ लेख्दै उनले भनेकी छन्, ‘झाँक्रीलाई नेता मान्ने र सम्पर्कमा भएकाहरूले यो छोरीको प्रश्न सुनाइदिनू ।’
झाँक्रीले एउटा भाषणमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई शीतलनिवासबाट निस्केर बालकोट जान चेतावनी दिएकी थिइन् । साथै उनले विधवा बनेपछि भण्डारीले सेतो सारी लगाएको विषयमा पनि टिप्पणी गरेकी थिइन् ।
उषाकिरणले आफ्नो झाँक्रीलाई आमाको रातो सारी र आफूहरुको बाल्यकाल फिर्ता ल्याइदिन र आफूहरुले भोग गरेको चिज लैजान चुनौती दिएकी छन् ।
‘तपाईं उहाँको सिन्दूर–पोते, रातो सारी, हाम्रो ड्याडी, हाम्रो बाल्यकाल फिर्ता ल्याइदिनुस् । अनि तपाईंलाई हामीसँग त्यस्तो के नाफा भएको छ जस्तो लाग्छ, लिएर जानुस् ।’ बुवाको मृत्युपछिको पीडा सहन आमाले गरेको संघर्षको झलक पनि उनले प्रस्तुत गरेकी छन् ।
उषाकिरण लेख्छिन्, ‘तपाईं कम्युनिस्ट स्कुलिङको हो भने हो भने सांस्कृतिक आन्दोलन कति पेचिलो हुन्छ बुझ्नु पर्ने । मेरी आमा एउटा अकल्पनीय घटना सामना गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तपाईं सेतो सारीको कुरा गर्नु हुन्छ, हाम्रो घरमा सेतो तन्ना, सेतो सोफा, सेतै भित्ता थिए । उहाँले बाबालाई मनपर्ने खाना र अचार बनाउन छोडनु भयो । उहाँका ससाना छोरीहरू हामीले प्रश्न उठाएनौं । तपाईं उहाँको सारीमा प्रश्न उठाउने को हो ?’
झांक्रीलाई नेता मान्ने र सम्पर्कमा भएको ले यो छोरीको प्रश्न सुनाइदिनु See Less
प्रकाशित :माघ १९, २०७७ सोमवार - ११:५९:४९
# उषाकिरण भण्डारी